Ajanony ny fihinanana zava-mamy - mahafoy ny siramamy amin'ny fomba mety
Arakaraka ny fihinanana zava-mamy no mahabe ny filan'ny zava-mamy hitranga, ary mihoatra ny sakafo siramamy - amin'ny endrika tsy mampidi-doza: mofomamy, vatomamy, mofomamy, ranon-tsakafo, zava-pisotro misy gazy karbonika - miteraka risika amin'ny fiatrehana ny lava - voka-dratsy ateraky ny fotoana fohy sy fohy amin'ny siramamy be loatra, ary miteraka fahasimban'ny fahasamihafana miovaova.
Ny mety hisian'ny aretim-po dia mitombo;
fahafahana fampandrosoana ny diabeta;
Olana amin'ny nify.
Ny tavy matavy loatra sy ireo loza mety hitranga dia tsy ny voka-dratsy mety hitranga amin'ireo manana nify mamy.
Maloka ny fomba fijery, fa ny sasany azo avadika ary ny sasany azo sorohana amin'ny fanesorana siramamy, na amin'ny fihenan'ny habetsany.
Fanafoanana ny fahasahiranana
Tsy mora foana ny miala amin'ny mamy, na mampihena ny habetsany, mahalana no miala ny fiankinan-doha tsy misy soritr'aretin'ny fisintahana - faniriana mafy ny zava-mamy, aretin'andoha, tebiteby, havizanana - amin'ny ankapobeny, manomboka mihena izy ireo aorian'ny herinandro, na mitazona mandritra ny roa na telo herinandro - miankina amin'ny habetsahan'ny zava-mamy nandritry ny fomba fiainanao taloha (ohatran'ny andevozin'ny siramamy ianao). Mahalana izany no lasa olana toy izany, fa diniho ny soritr'aretin'ny fanesorana siramamy - rehefa mitondra fiara, ary aiza no ilaina ny fifantohana sy ny fifantohana.
Inona no fomba mety hialana amin'ny vatomamy?
Azonao atao ny manala siramamy tsikelikely, vokatra vokarin'ny vokatra - very ny fahazaran-dronono zava-siramamy, esory ny manaraka, sns., Raha toa ka mahery loatra aminao ny fandavana indray mandeha. Eto, toy ny amin'ny zava-drehetra, tsara kokoa ny tsy mamita-tena, ary raha azo atao ny miala tanteraka amin'ny siramamy, dia ilaina kokoa ny milavo lefona, fa tsara ho anao ny mahita izay hatao.
Raha te handray anjara bebe kokoa amin'ny fizotrany ianao - ilaina ny mahatakatra izay ilainao azy, ilaina ny maniry an'io - ho iray amin'ireo safidy - azonao atao ny manoratra lisitra iray miresaka izany rehefa "manjavozavo" ny laharam-pahamehana sy ny antony manosika. .
Raha "tafintohina" tampoka ianao ary nanomboka nihinana zava-mamy indray, dia tsy tokony ho sosotra be ianao. Mianara avy amin'ilay lalana, na dia fohy aza ny lalana dia sorito ny laharam-pahamehana vaovao ary manohiza miaina tsy misy siramamy. Rehefa milamina sy vonona ianao dia manomboka indray.
Amin'ity làlana ity dia zava-dehibe izany ialao ny tsy fahampiana rano, ary miendrika endrika: sakafo ara-dalàna sy miovaova tsy misy siramamy, manankarena fibre, otrikaina, tavy mahasalama, proteinina, rano madio (lohataona) - izany no mahatonga antsika, fa tsy siramamy: mamokatra, mahasalama ary miasa.
Fahano ny vatanao (amin'ny antonony, mazava ho azy) sakafo mahasalama sy mahasalama ampy - izany dia hampihena ny filàna misambotra hanoanana, ary hampihena ny filan'ny sakafo mamy sy tsy mahasalama. Ny ati-doha dia tsy maintsy mahatakatra fa ny vatana eo ambany fifehezany, ary izy tenany, dia manana ny zava-drehetra mba hiantohana ny fiainana, sy ny ati-doha, satria mpiasa mafy tsy an-kijanona (izay isaorany fatratra), ary izy io dia tena be voninahitra sy milamina mandany angovo 20% amin'ny vatana iray manontolo ny fanjakana, ary raha ampiasain'ny ati-doha sy ny vatana (izay irina) izany, dia mety ny vidin'ny microelement ilaina, ary mila mameno azy ireo izy ireo, ary ny siramamy artifisialy dia tsy mpanampy eto, fa enta-mavesatra fotsiny - na ho an'ny atidoha na ho an'ny vatana ...
Safidy ahafahanao manomboka miala amin'ny mamy
Zava-pisotro mamy - misy rano, raha te hanova ny tsiro ianao dia ampio voasarimakirana na mintà kely;
Serealy sakafo maraina mamy - ho an'ny atody voatoto, hazan-dranomasina, oatmeal misy voankazo, legioma ary voaroy vaovao;
Sakafo maivana mamy - ohatra, ny voanjo, legioma, atody nandrahoina, masaka - izay tsara kokoa ny mahandro irery (avy amin'ny hena sy ny zava-manitra), ilay voavidy dia mety misy siramamy betsaka;
Raha tokony ho vatomamy ho an'ny tsindrin-tsakafo ... Tena tsy voky ve ianao? Tsia, avy eo mihinana, ohatra - voankazo maina, amandy, daty, pistachios, kennel na voanjo hafa, vitsivitsy:
Ice cream - mandritra ny alina anaovana bemidina amin'ny vata fampangatsiahana - ho an'ny fromazy tsara (voajanahary sy amin'ny antonony) miaraka amin'ny legioma, fromazy kely misy voankazo na voanjo maina;
Soloy ny zava-drehetra mamy sy manimba amin'ny ankapobeny - tsy misy siramamy voajanahary, ary raha mety dia salama. Ny mampidi-doza izaitsizy dia tsy mora ny mahita, ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy misy antony hanasarotana azy loatra.
Eny ... Mazava ho azy fa faniriana ny hanana torimaso ampy, mazava ho azy fa mila mijanona ho tsara hatrany ianao. Noho izany, mamakia boky mahaliana, mijery sarimihetsika tsara, mandehana amin'ny rivotra madio, miresaka amin'ny namana amin'ny lohahevitra samihafa - fa tsy momba ny custard sy crème fotsiny. Oh yeah ... "Alatsinainy" te-hanomboka hanao fanazaran-tena ary handeha ho any amin'ny gym? Matoky ny fahasalamanao ve ianao? Ary ny kilasy tsy contraindicated ho anao? Ka izao no fotoana - eny, ny alatsinainy ho avy izao koa dia azo atao, fa izao dia izao.
Rehefa afaka kelikely, aorian'ny famerana (fandavana) amin'ny zava-mamy, dia mety hahatsapa ho salama kokoa ianao - lasa tsy malaina, hihatsara ny toetranao, ary hiseho ny angovo azo antoka mandritra ny andro. Miala tsikelikely ny faniriana zava-mamy, misy ny faniriana greens sy proteinina. Ny vatanao dia zatra maka otrikaina avy amin'ny sakafo ara-dalàna izay kely na tsy misy (izay tsy fahita firy) siramamy artifisialy.
Tokony esorina tanteraka ve ny vatomamy?
Tsy amin'ny toe-javatra rehetra dia tsara ny mampijaly tena amin'ny fandavana tanteraka ny zava-mamy, mamafa ny ranomaso mandriaka amin'ny fahitana takelaka aseho miaraka amin'ny tsindrin-tsakafo. Mitondrà fitsaboana matsiro indraindray, raha manentana ny fanahinao izany. Fa zava-dehibe ny mahatakatra ny zavatra iatrehanao - toy ny amin'ny zavatra hafa rehetra, mampiasa fomba hendry. Ohatra ... Mifikitra amin'ny lalàna 80/20, izay 80 isan-jato dia sakafo voajanahary, voajanahary, mahasalama. Ary amin'ny 20 isan-jaton'ny tranga (indray mandeha, na indroa isan-kerinandro, angamba matetika kokoa - raha kely), manaova "ankanavaka mamy" - raha tsy lasa olana izany ary tsy mahasosotra anao.
Matetika, ireo izay namoy siramamy dia faly tamin'ny fahalalahana tamin'ity fiankinan-doha ity ka tsy azon'izy ireo an-tsaina akory ny antony hamerenany azy rehetra.
Saccharinate sôdiôma: tombontsoa sy voka-dratsy
Charlotte tsy misy siramamy - recette
Tantely akasia: fananana mahasoa sy contraindications
Sakafo ara-pahasalamana nefa tsy mampandefitra ireo manana nify mamy
Azo sitranina ny diabeta mellitus?
62 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,440.